ချယ်လ်ဆီးနည်းပြသစ် ဆာရီအတွက် စိန်ခေါ်မှု၊ ဖိအားတွေက ရှေ့မှာ စောင့်ကြိုနေပြီ
ချယ်လ်ဆီးနည်းပြသစ် ဆာရီ Sarri အတွက် စိန်ခေါ်မှု၊ ဖိအားတွေက ရှေ့မှာ စောင့်ကြိုနေပြီ
7 Aug 2018 . 11:39 AM
ချယ်လ်ဆီးနည်းပြသစ် ဆာရီ Sarri ကတော့ အသင်းကို ကိုင်တွယ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ စိန်ခေါ်မှု၊ ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ ကွန်တီ Conte ရဲ့ လက်ထက်မှာ တပ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး Evolution ပုံစံနဲ့ တဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်သွားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရင်နည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho လိုမျိုး ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ပြီး Revolution ပုံစံနဲ့ သွားမလား။ သေချာတာကတော့ လက်ရှိ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ အားနည်းချက် အများကြီးရှိနေတယ်။ နောက်ပြီး အဓိက ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟာဇက် Hazard ၊ ကော်တိုအာ Courtois တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကလည်း လှုပ်ခတ်နေဆဲပဲ။
အဆိုးဆုံးက တိုက်စစ်ပိုင်း။ ဒီယေဂိုကော်စတာ Diego Costa မရှိတော့ကတည်းက ရုန်းကန်နေရတဲ့ တိုက်စစ်က အခုအချိန်အထိ အခြေအနေဆိုးနေဆဲ၊ ရုန်းကန်နေရဆဲ။ အားကိုးတကြီးနဲ့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ မိုရာတာ Morata ကလည်း အခုအထိ အလုပ်က မဖြစ်။ ဒီအနေအထားကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆာရီ ခေါင်းစားရဦးမယ်။
နောက်တစ်ခုက ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နောက်ဆုံး(၃)ရာသီအခြေအနေပါ။ မနှစ်က အဆင့်(၅)၊ ၂၀၁၆-၁၇ မှာ ချန်ပီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ မှာ အဆင့်(၁၀)။ အနိမ့်အမြင့်၊ အတက်အကျတွေက ကြမ်းလွန်းတယ်။ အသင်းကို တည်ငြိမ်မှု ရှိအောင်လုပ်ဖို့ကလည်း ဆာရီရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကျလာခဲ့ပြန်တယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ Abramovich ဟာ ကွန်တီကို ထုတ်ပြီး ဆာရီကို နည်းပြသစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာက မှားတယ်လို့ မဆိုသာသလို မှန်တယ်လို့လည်း ပြောလို့မရဘူး။
ကွန်တီဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနည်းပြဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ ဒုတိယရာသီမှာ FA ဖလားတွေ ရယူပေးခဲ့သူ။ သူနဲ့ ဒီယေဂိုကော်စတာကြားက ပြဿနာ၊ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေမှာ အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျနဲ့ အဆင်မပြေခဲ့လို့ စတေးခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ ကွန်တီကို ထုတ်ပြီး ဆာရီကို နည်းပြသစ် ခန့်အပ်ခဲ့တာက အလောင်းအစားဆန်လွန်းပါတယ်။
ဆာရီရဲ့ နောက်ခံ Background ကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း အသက်(၄၀)မတိုင်ခင်အထိ ဘဏ်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်၊ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှ နည်းပြလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်လာတယ်။ နာပိုလီအသင်းကို ကိုင်တွယ်ချိန်မှ သူ့ရဲ့ တိုက်စစ်အသားပေး နည်းဗျူဟာကြောင့် ထင်ရှားလာပေမယ့် သူ့ Career ကို ပြန်ကြည့်ရင် ဘာဆုဖလားမှ မရခဲ့ဖူးပါဘူး။
အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျဆိုတာကလည်း အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှု ရယူလိုတဲ့အပြင် ဖော်ျဖြေမှုပေးနိုင်တဲ့ ကစားဟန်ကို သဘောကျသူဖြစ်ပြီး လိုချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင် နည်းပြတစ်ဦးကို စတေးပစ်ဖို့ ၀န်လေးတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲတုန်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက ထင်သလောက် မဟုတ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရမှာပါ။
ယော်ဂျင်ဟို Jorginho တစ်ယောက်တည်းကို ခေါ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးသလို၊ ဆာရီရဲ့ နည်းဗျူဟာနဲ့ ကစားသမားတွေ အသားကျဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဆာရီရဲ့ အနေအထားကို ခန့်မှန်းဖို့က စောတော့ စောပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ ဆာရီအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေကို လက်မလွှတ်ရဖုိ့၊ ကစားသမားသစ် ထပ်ဖြည့်ဖို့ကို အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆုဖလားအောင်ြမင်မှုတွေ ရ၊ မရကတော့ ရာသီကုန်ကျမှပဲ အဖြေထွက်မှာပါ။ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြသစ် ဆာရီအတွက် စိန်ခေါ်မှု၊ ဖိအားတွေက ရှေ့မှာ စောင့်ကြိုလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ် . . .
ခယျြလျဆီးနညျးပွသဈ ဆာရီ Sarri အတှကျ စိနျချေါမှု၊ ဖိအားတှကေ ရှမှေ့ာ စောငျ့ကွိုနပွေီ
ခယျြလျဆီးနညျးပွသဈ ဆာရီ Sarri ကတော့ အသငျးကို ကိုငျတှယျပွီး မကွာခငျမှာပဲ စိနျချေါမှု၊ ဖိအားတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီ။ ကှနျတီ Conte ရဲ့ လကျထကျမှာ တပျပကျြကွီးတဈခုလိုဖွဈနတေဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးကို လှဲပွောငျးရယူခဲ့ပွီး Evolution ပုံစံနဲ့ တဖွညျးဖွညျးတညျဆောကျသှားမလား၊ ဒါမှမဟုတျ အရငျနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho လိုမြိုး ကစားသမားသဈတှေ ချေါပွီး Revolution ပုံစံနဲ့ သှားမလား။ သခြောတာကတော့ လကျရှိ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ အားနညျးခကျြ အမြားကွီးရှိနတေယျ။ နောကျပွီး အဓိက ကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ ဟာဇကျ Hazard ၊ ကျောတိုအာ Courtois တို့ရဲ့ အနာဂတျကလညျး လှုပျခတျနဆေဲပဲ။
အဆိုးဆုံးက တိုကျစဈပိုငျး။ ဒီယဂေိုကျောစတာ Diego Costa မရှိတော့ကတညျးက ရုနျးကနျနရေတဲ့ တိုကျစဈက အခုအခြိနျအထိ အခွအေနဆေိုးနဆေဲ၊ ရုနျးကနျနရေဆဲ။ အားကိုးတကွီးနဲ့ ချေါခဲ့တဲ့ မိုရာတာ Morata ကလညျး အခုအထိ အလုပျက မဖွဈ။ ဒီအနအေထားကို ဖွရှေငျးဖို့ ဆာရီ ခေါငျးစားရဦးမယျ။
နောကျတဈခုက ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ နောကျဆုံး(၃)ရာသီအခွအေနပေါ။ မနှဈက အဆငျ့(၅)၊ ၂၀၁၆-၁၇ မှာ ခနျြပီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ မှာ အဆငျ့(၁၀)။ အနိမျ့အမွငျ့၊ အတကျအကတြှကေ ကွမျးလှနျးတယျ။ အသငျးကို တညျငွိမျမှု ရှိအောငျလုပျဖို့ကလညျး ဆာရီရဲ့ ခေါငျးပျေါကလြာခဲ့ပွနျတယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးပိုငျရှငျ အဘေရာမိုဗဈချြ Abramovich ဟာ ကှနျတီကို ထုတျပွီး ဆာရီကို နညျးပွသဈခနျ့အပျခဲ့တာက မှားတယျလို့ မဆိုသာသလို မှနျတယျလို့လညျး ပွောလို့မရဘူး။
ကှနျတီဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးနညျးပွဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ ဒုတိယရာသီမှာ FA ဖလားတှေ ရယူပေးခဲ့သူ။ သူနဲ့ ဒီယဂေိုကျောစတာကွားက ပွဿနာ၊ အပွောငျးအရှကေိ့စ်စတှမှော အဘေရာမိုဗဈချြနဲ့ အဆငျမပွခေဲ့လို့ စတေးခံလိုကျရတယျလို့ပဲပွောရမယျ။ ကှနျတီကို ထုတျပွီး ဆာရီကို နညျးပွသဈ ခနျ့အပျခဲ့တာက အလောငျးအစားဆနျလှနျးပါတယျ။
ဆာရီရဲ့ နောကျခံ Background ကို ပွနျကွညျ့ရငျလညျး အသကျ(၄၀)မတိုငျခငျအထိ ဘဏျမှာ အလုပျလုပျတယျ၊ အဲဒီနောကျပိုငျးမှ နညျးပွလောကထဲ ခွစေုံပဈဝငျလာတယျ။ နာပိုလီအသငျးကို ကိုငျတှယျခြိနျမှ သူ့ရဲ့ တိုကျစဈအသားပေး နညျးဗြူဟာကွောငျ့ ထငျရှားလာပမေယျ့ သူ့ Career ကို ပွနျကွညျ့ရငျ ဘာဆုဖလားမှ မရခဲ့ဖူးပါဘူး။
အဘေရာမိုဗဈချြဆိုတာကလညျး အခြိနျတိုအတှငျး အောငျမွငျမှု ရယူလိုတဲ့အပွငျ ဖြေျာဖွမှေုပေးနိုငျတဲ့ ကစားဟနျကို သဘောကသြူဖွဈပွီး လိုခငျြတဲ့အတိုငျးမဖွဈရငျ နညျးပွတဈဦးကို စတေးပဈဖို့ ဝနျလေးတဲ့သူ မဟုတျဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျးပှဲတုနျးက ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးက ထငျသလောကျ မဟုတျခဲ့တာ ပရိသတျတှေ တှမွေ့ငျခဲ့ရမှာပါ။
ယျောဂငျြဟို Jorginho တဈယောကျတညျးကို ချေါရုံနဲ့ မလုံလောကျသေးသလို၊ ဆာရီရဲ့ နညျးဗြူဟာနဲ့ ကစားသမားတှေ အသားကဖြို့ လိုနပေါသေးတယျ။ အခုလောလောဆယျတော့ ဆာရီရဲ့ အနအေထားကို ခနျ့မှနျးဖို့က စောတော့ စောပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ သခြောတာကတော့ ဆာရီအနနေဲ့ အသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှကေို လကျမလှတျရဖုိ့၊ ကစားသမားသဈ ထပျဖွညျ့ဖို့ကို အာရုံစိုကျ ဆောငျရှကျရမှာဖွဈပွီး ဆုဖလားအွောငျမငျမှုတှေ ရ၊ မရကတော့ ရာသီကုနျကမြှပဲ အဖွထှေကျမှာပါ။ ခယျြလျဆီးနညျးပွသဈ ဆာရီအတှကျ စိနျချေါမှု၊ ဖိအားတှကေ ရှမှေ့ာ စောငျ့ကွိုလို့နပွေီဖွဈပါတယျ . . .